Kardinaly Désiré Tsarahazana : Lamesa voalohany notarihiny ny tetsy Antanimena -
AccueilRaharaham-pirenenaKardinaly Désiré Tsarahazana : Lamesa voalohany notarihiny ny tetsy Antanimena
Nitarika ny lamesa voalohany taorian’ny fanamasinana ny maha Kardinaly azy i Désiré Tsarahazana, omaly, tetsy amin’ny Ekar Masindahy François-Xavier, Antanimena. Tonga nanotrona izany lamesa lehibe izany ny Filoham-pirenena mivady sy ireo olo-manan-kaja maro ary ireo mpitarika fiangonana sy mpino katolika.
Tsiahivina fa ny 20 avrily teo izy no voatendry ho Kardinalin’i Madagasikara, ka ny 27 jona no nametrahan’ny Papa Ray Masina, François, ny mariky ny maha Kardinaly azy tany Vatican, Italia. Taorian’izany lanonana fametrahana ny marika ho azy izany, nanambara tamin’ny onjam-peon’ny Vatican News ny kardinalin’i Madagasikara vaovao fa laharam-pahamehany ny fitondrana tsirim-panantenana ho an’ny Malagasy mba hitraka sy hiezaka amin’ny fanarenana ny firenena.
Ny fanendrena ny Kardinaly vaovao dia tsapa tamin’ny alalan’ny fahatongavany teto an-tanindrazana, ny talata 10 jolay teo, fa nampiray fo ireo mpanao politika sy ny fiarahamonina malagasy.
Ankoatra izay, mitohy amin’ny alahady izao any Toamasina, kosa ny lamesa lehibe faharoa ho fandraisana ny Kardinaly Désiré Tsarahazana.
Marihina fa anisan’ny teny notazoniny nanomboka izy pretra hatramin’ny maha Kardinaly azy izao ny teny nontsongaina tao amin’ny bokin’ny Romana 12 :21 manao hoe : « Aza manaiky ho resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy ».